XOG : 4 Wasiir oo katirsanaa Wasiirada Xukumadii Hore oo lagu arki doono Wasiirada Cusub (Magacyada & Beelahooda) | Nabadqaad Online
XOG : 4 Wasiir oo katirsanaa Wasiirada Xukumadii Hore oo lagu arki doono Wasiirada Cusub (Magacyada & Beelahooda)
Ra’isul wasaaraha DF Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku jira latashiyadii ugu dambeeyay ee uu kusoo magacaabayo golaha wasiirada.
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay shabakadda Nabadoon.com ayaa sheegaya in arbacada soo aadan lagu dhawaaqi doono wasiirada cusub markaas oo la filayo inuu madaxweyne Farmaajo ka dhoofo Muqdisho.
Ilo wareedyada aan helnay ayaa sheegaya in ugu yaraan afar wasiir oo horey ugu tirsana xukumadii Cumar Cabdi Rashiid ay kusoo laaban donaan xukumada cusub.
Wasiirkii amniga qaranka C/risaaq Cumar Maxamed oo kasoo jeeda beesha Xawaadle ayaa la filayaa inuu kusoo laabto kursigiida kadib markii uu helay taageerada ugaaska beeshaas.
Cali Axmed Jaamac Jangali oo ahaa wasiirkii hore ee Wasaaradda Gaadiidka & Duulista Hawada kana soo jeeda beesha Dhulbahante ayaa la filayaa inuu xil kale ka helo xukumada cusub.
Ra’isul Wasaare ku xigeenka haatan ee dowlada Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa isna la filayaa in lagu arko liiska golaha wasiirada, siyaasigan oo haysta taageerada madaxweyne Farmaajo kana soo jeeda beesha Isaaq/Habar Awal ayaa dadaal ugu jira inuu mar kale noqdo wasiir.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Maxamed Aadan Ibraahim “Fargeti” oo ah sii hayaha Wasaaradda Maaliyadda kana soo jeeda Mirifle, Sideed, Boqol Hore, isna uu kamid yahay xubnaha ugu hadal heynta badan ee kasoo muuqan kara liiska golaha wasiirada cusub.
Maxamed Cumar Ceymooy, oo ah sii hayaha W. Kalluumeysiga Kheyraadka Badda. (Beesha Shanaad, Jareer Weyne, Shiidle) ayaa isna ku jira liiska shaqsiyaadka la filayo iney kamid noqdaan wasiirada cusub.
Dhamaan shaqsiyaadkan ayaa intooda badan haysta taageerada madaxweynaha DF Soomaaliya, halka gudoomiyaha barlamaanka uu dabaka ka riixayo qaarkood.
RW Xasan Cali Kheyre ayaa doonayay in loo madax baneeyo magacaabida golaha wasiirada, hase ahaatee waxaa in haatan madaxweynaha iyo gudoomiyaha barlamaanka ay doonayaan iney wasaaradaha qaar ku lug yeeshaan soo magacaabidooda.